को Airbus A3 बहु-Livery प्याकेज स्थापना पछि कुनै 330D ककपिट
प्रश्न को Airbus A3 बहु-Livery प्याकेज स्थापना पछि कुनै 330D ककपिट
1 वर्ष 10 महिना पहिले #703 by Acerazus
मैले पहिले Airbus A330 बहु-लेवी प्याकेज स्थापना गरें, त्यसपछि मैले एअरबस एक्सएनएमएक्स मेगा प्याकेज भोल्युमएनक्स स्थापित गर्दछु। त्यसपछि, म एयरबस एक्क्सम्युक्स मेगा प्याकेज ज्वाला 340 स्थापना गर्दछु। अचानक A1 र A340 (Vol। 2) अब तिनीहरूको 330D काकपिटहरू छैन! मैले पुन: स्थापना गर्ने सबै चीजहरू प्रयास गरेँ र यस्तो र मैले पनि गेज उपकरण प्रयोग गरें तर यसले सानो सहयोग गर्यो। कुनै पनि सहयोगको प्रशंसा गरिनेछ।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #711 by ricsmi
मलाई एउटै समस्या होईन, मद्दत कसैलाई सराहना गरिनेछ।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #712 by Dariussssss
नमस्ते तपाईं र स्वागत छ।
प्याकमा केही विमानहरू POSKY बाट छन्, र तिनीसँग भित्तामा छैन। थमस रूथका मानिसहरूसँग यो छ।
1 वर्ष 10 महिना पहिले #717 by ricsmi
Dariussssss लेखिएको: नमस्ते तपाईं र स्वागत छ।
को उत्तर को लागि धन्यवाद, यो त POSKY व्यक्तिहरूलाई कुलपति छ बनाउन जसरी छ?
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.212 सेकेन्ड